EVY's Kitchen: ဆန်ပြားခေါက်ဆွဲ
Posted by Evy at 11:23 PM
Love it so ! Look yummy !
ဆန်ပြားတော့ တအားကြိုက်တယ် အိရေ စုလုပ်စားကြည့်မယ်
ဆန်ပြားခေါက်ဆွဲကို ရှမ်းပြည်နေတုန်းက မကြာခနစားဘူးတော့ ငယ်စဉ်ထဲကနှစ်သက်တယ်။
ခေါက်ဆွဲဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်ပြီးသားပဲ Evy ရေ။ နည်းလေးယူသွားတယ်း)